Hannibal, ရှေးဟောငျးအီရောမမြို့, က Black ၏ရန်သူခဲ့သလား
Hannibal ဘာစီလိုနာသမိုင်းအတွက်ကြီးစွာသောစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်များတစ်ဦးဖြစ်စဉ်းစားသူတစ်ဦး Carthaginian ယေဘုယျဖြစ်ခဲ့သည်။ Hannibal 183 ဘီစီတွင်မွေးဖွားတို့နှင့်ကြီးသောနိုင်ငံရေးနှင့်စစ်ရေးခိုက်ရန်နေတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းနေထိုင်ခဲ့ခဲ့သည်။ ကားသေ့ချြဂရိနှင့်ရောမအင်ပါယာနဲ့တခြားစီဖြစ်နေပါတယ်မကြာခဏခဲ့သည့်မြောက်ပိုင်းအာဖရိကအတွက်ကြီးမားတဲ့နှင့်အရေးကြီးသော Phoenician မြို့-ပြည်နယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Hannibal အာဖရိကမှလာသောကြောင့်, မေးခွန်းတခါတရံဟုမေးဖြစ်ပါတယ် "ဟု Hannibal အနက်ရောင်ခဲ့တာလဲ"
အဘယ်အရာကိုသတ်မှတ်ချက်များကို "Black" ကိုကဆိုလို "အာဖရိက?"
US မှာခေတ်သစ်အသုံးပြုမှုအတွက်အသုံးအနှုန်းက Black '' လူမည်း '(niger) အတွက်ဘုံလက်တင်နာမဝိသေသနဆိုလိုဘယျကနေကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုကိုဆိုလိုသည်။ ဖရန့်အမ်စနိုးဒန်ကသူ၏ဆောင်းပါး၌ဤကရှင်းပြသည် "ဟုရှေးမြေထဲကမ္ဘာ့ဖလားအတွက်အာဖရိကလူမည်းတွေအကြောင်းကိုအထငျမှား။ အထူးကုများနှင့် Afrocentrists" တစ်မြေထဲလူတစ်ဦးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ဆစျသီယာသို့မဟုတ်အိုင်ယာလန်ကနေတစ်စုံတစ်ဦးကသိသိသာသာအဖြူကြီးနှင့်အာဖရိကမှတစ်စုံတစ်ဦးကိုသိသိသာသာအနက်ရောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
အဲဂုတ္တုပြည်၌မြောက်ပိုင်းအာဖရိက၏အခြားဒေသများ၌ရှိသကဲ့သို့, အသားအရေကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုသောနိုင်သောအခြားအရောင်များရှိကြ၏။ မြောက်ပိုင်းအာဖရိကအတွက်ပိုမိုပေါ့ပါး-skin ကလူနှင့်မဲမှောင်-skin ကလူကုရှသို့မဟုတ် Nubian ကိုခေါ်အကြားထိုကဲ့သိုကောင်းတစ်ခုသဘောတူညီမှုလည်းရှိခဲ့သည်။ Hannibal မှောင်-skin ရောမထက်ခဲ့ကြပေမည်, ဒါပေမယ့်သူကအဲသယောပိအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ကြသည်မဟုတ်ပေ။
Hannibal တစ် Carthaginian မိသားစုထံမှမြောက်ပိုင်းအာဖရိကအဖြစ်ရည်ညွှန်းထားတဲ့ဧရိယာကနေရောက်လာတယ်။
အဆိုပါ Carthaginians ခဲ့ကြသည် ဖိုနီးရှား သူတို့သမားရိုးကျတစ်ဦးဆီးမိုက်သောလူအဖြစ်ဖော်ပြခံရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်သော။ အဆိုပါအသုံးအနှုန်းဆီးမိုက်မှလူတွေကအမျိုးမျိုးကိုရည်ညွှန်းသည် ရှေးခေတ်အနီးအရှေ့ မြောက်ပိုင်းအာဖရိက၏အစိတ်အပိုင်းများကိုထည့်သွင်းထားတဲ့ (ဥပမာ, အာရှုရိလူ, အာရပ်နှင့်ဟေဗြဲ) ။
ဒါဟာ Hannibal တူဘာတွေသိထားရန်ဒါခက်ခဲသည်အဘယ်ကြောင့်
Hannibal ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသွင်အပြင်ဖော်ပြထားသို့မဟုတ်ပြသဆိုတာတော့သေချာတယ် form မှာ, ဒါကြောင့်ရိုးရိုးမဆိုတိုက်ရိုက်သက်သေအထောက်အထားမှထောက်ပြဖို့ခက်ခဲသည်မဟုတ်ပါ။
သူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှု၏ကာလအတွင်းသည့်ဒင်္ဂါး Hannibal ပုံဖော်နိုင်ပေမယ့်လည်းသူ့ဖခင်သို့မဟုတ်အခြားဆွေမျိုးသားချင်းပုံဖော်နိုင်ပါတယ်။ က Hannibal အာဖရိက၏အတွင်းပိုင်းကနေဘိုးဘေးခဲ့ဖြစ်နိုင်စဉ်များအပြင်, သမိုင်းပညာရှင်ပက်ထရစ် Hunt က၏လုပျငနျးအပေါ်အခြေခံပြီးစွယ်စုံကျမ်း Britannica အတွက်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်အရသိရသည်ကျနော်တို့အတွက်သို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်ခြင်းမရှိရှင်းရှင်းလင်းလင်းသက်သေအထောက်အထားများရှိသည်:
မိမိအ DNA ကိုနှင့်စပ်လျဉ်းအဖြစ်ဝေးကြှနျုပျတို့သိအဖြစ်, ငါတို့သည်နောက်အရိုးစု, fragmentary သွေ့ခြောက်သောအရိုး, ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခြေရာတွေရှိသည်, ဒါကြောင့်မိမိအလူမျိုးစုထူထောင်အများစုမှန်းဆပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာသူ့မိသားစုမျိုးရိုးအကြောင်းကိုငါသိ၏ထင်သောအရာကို မှစ. သို့သော်မိမိအ Barcid မိသားစု (ပင်လက်ျာနာမညျကိုဖွင့်လျှင်) ယေဘုယျအားဖြင့်ဖိုနီးအထက်တန်းလွှာကနေဆငျးသအဖြစ်နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့သည်။ ... [ဒီတော့] သူ့ရဲ့မူလမျိုးရိုးခေတ်သစ်လေဗနုန်တောသည်ယနေ့ကဘာလဲဆိုတာတည်ရှိသောမည်ဖြစ်သည်။ အဖြစ်ဝေးကြှနျုပျတို့သိအဖြစ်, နည်းနည်းမျှ African-လျှင်ရန်သူ၏ခေတ်မတိုင်မီသို့မဟုတ်စဉ်အတွင်းကြောင်းဒေသအတွင်းရှိတစ်ဦးလက်ခံနိုင်ဖွယ်-ဖြစ်ပျက်အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဖိုနီးရှားရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာယခုတူနီးရှားကဘာလဲဆိုတာအခြေချကတည်းက ... နီးပါး 1000 နှစ်ပေါင်း Hannibal မီ, ကျွန်တော် shouldn .... သူ့မိသားစုကိုမြောက်အာဖရိကတှငျနထေိုငျထို့နောက်ပြည်သူများနှင့်အတူ DNA တွင်ရောနှောခဲ့အလွန်ဖြစ်နိုင်ဖွယ် '' t ကိုကားသေ့ချြ၏ဒေသမဆိုဖြစ်နိုင်သောအာဖရိကငြင်းဆိုသည်။
> စွယ်စုံကျမ်း Britannica ။ စွယ်စုံကျမ်း Britannica, Inc
> စနိုးဒန်ဂျူနီယာ, ဖရန့်အမ် Arion ။ တတိယစီးရီး, Vol ။ 4, အမှတ် 3, ဆောင်းရာသီ, 1997, စစ။ 28-50 ။
အဆိုပါ Maginot လိုင်း: ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကပြင်သစ်ကာကွယ်ရေးပျက်ကွက်
Gilles က de Rais 1404 - 1440
Funny ငေါ့နှင့်အတူကိုယ်သင်လက်နက်တစ်ခုထာဝရသက်ရောက်မှု Make မှကိုးကား
Derweze, တာ့ခ်မင်နစ္စတန်အတွက်ဂျဟန္နမ်ငရဲဘုံ၏ Gates က
Scuba ရေငုပ်အတွက် Martini Effect
ကလေးများသည်ငါးထိပ်တန်း Notch အဘိဓာန်များ၏စာရင်း
နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေါလ်များအတွက် Dolch မွစကား
အစ်ဂဘို Ukwu (နိုင်ဂျီးရီးယား): အနောက်အာဖရိကသင်္ချိုင်းများနှင့်ဘုန်းကြီးကျောင်း
ပထမကမ္ဘာစစ်: Zimmerman ကြေးနန်း
ကလေးများအတွက်ထိပ်တန်း 10 သန့်ရှင်းပါတီသီချင်းများ
ဟောင်ကောင်၏တိုက်ပွဲ - ဒုတိယကမ္ဘာစစ်
Microsoft က Access ကို 2013 ခုနှစ်တွင်ဒေတာဘေ့စပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး
Tracy လက်တနေဖြင့် "Superior Donuts"
LSU GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ